रसाए सबैको आखामा आशु ,गौरीशा र सुरजको पहिलो भेटमै चल्यो रुवाबासी ! (भिडियो हेर्नुहोस) – Post Patrika
मुख्य पृष्ठ /Video/रसाए सबैको आखामा आशु ,गौरीशा र सुरजको पहिलो भेटमै चल्यो रुवाबासी ! (भिडियो हेर्नुहोस)
पछिल्लो समय सामाजिक संजाल टिकटक सबैले रुचाएको एप हो। टिकटक को माध्यमले धेरै मानिसहरु ले आफ्नो भबिस्य बनाएका छन् भने कति ले गालि पनि खाइरहेका छन्। टिकटक बाट आफुले भित्र लुकेर रहेका प्रतिभा हरु देखाउने गरेको पाइन्छ।
टिकटक मा धेरै किसिमका प्रतिभा हरु भएका व्यक्ति हरु देख्न पाइएको छ। ति प्रतिभा देखाउने मध्ये एक हुन् गौरिसा नेपाली। उनि टिकटल मा सर्बाधिक मन पराउने एक पात्र हुन्।
टिकटक मा उनले बाचन गर्ने शब्द मा कि आफ्नो कि अरुको कथा लुकेको हुन्छ त्यस कारण उनि सबैको प्यारी बनेकी छिन। सामान्य परिवार मा जन्मेकी गौरिसा ले जम्मा १० कक्षा मात्र पढेकी छिन।
उनलाई पढ्ने मन त कहाँ नभएको हो र तर के गर्नु उनको आर्थिक अवस्था नै नाजुक छ। उनि सानो छदै बुबाको निधन र त्यस पछि दिदीको बिहेको कारण ले सब जिम्बेबारी उनि माथि नै थुपिरियो।
आफुले पढ्न छोडेपनि भाईलाई पढाउनको लागि गौरिसा पोखरा मै दुई वटा होटेल मा काम गर्छिन। गौरिसा हेर्दा जति नै सुन्दर छिन त्यति नै उनका शब्द , भाब हरु छन।
गौरिसा मा यस्तो प्रतिभा छ कि उनले जो कोहीलाई मोहित बनाउने गर्दछिन्। आफ्नो पढाई लाई निरन्तरता दिन नसके पनि उनको कलालाई देखेर कसैले सिरियल मा अभिनय गर्न बोलाए भने उनि होटेल मा काम गर्न छोडी जानेछु पनि भनेकी छिन।
गौरिसा जस्तै अर्का एक व्यक्ति हुन् सुरज घिमिरे। उनि पनि टिकटक मा सबैले मन पराएका अर्का पात्र हुन्। उनले पनि आफ्नै युटुब च्यानल मार्फत साने नेपाली सिरियल प्रसारण गर्ने गरेका छन्। उनले आफ्नो सिरियल मा आबस्यक पर्ने कलाकार गौरिसा नेपालिलाई सुहाउने हुदा उनि भेट्न पोखरा सम्म पुगेका छन्। यस भिडियो तयार पार्दा सम्म पनि उनीहरुको अभिनय धेरै नै राम्रो भएको छ। पुरा जानकारीको लागि भिडियो हेरेर थाहा पाउनुहोस।